Kugadziridza pa-Peji SEO Kupa Rakakosha KwaWebsite Yako - Ongororo Kubva Semalt
Kune chero bhizinesi rekuInternet, kuwana kuwanika kwakakwana kunyanya internet kunokosha. Nekutsvaga mutengesi, kutarisa kuve kwakasimba muIndaneti mapurisa akaita sekutsvaga injini uye zvekugarisana nevanhu vanowanzova chinangwa chikuru. Iyi danho nderokuti Search Engine Optimization inouya kutamba. Icho chinangwa chepi zvese seSeop campaign inogadzira unhu hutsika hwe e-commerce yako website kuburikidza nekugadzirisa nzvimbo dzepamusoro muSERP yevamwe mazwi chaiwo chaiwo. Panyaya iyi, iyo yakakwirira nzvimbo yako inowanikwa, vanhu vakawanda vanotsvaga mazwi acho chaiwo angangodhura peji rako.
On-Peji SEO inobatsira mapeji kuwana simba mumagetsi ekutsvakurudza kuburikidza nezvinhu zvakadai sekusanangurwa kweshoko uye kusikwa kwezvinhu - covert cctv for home. Peji yepawebhu inotanga kutanga ine 99% mukana wekuwana yakawanda kuvhara, kunyanya kana zvinyorwa zvakakodzera. Zvisinei, kuita basa iri haisi nyore.
Lisa Mitchell, Mutungamiriri weKuteresi Achibudirira Semalt , rinotsanangura nzira dzinoverengeka dzekuti iwe unokwanisa sei kuwedzera yako peji peji SEO:
Kusarudzwa mazwi anosanangurwa
Kungofanana nedzimwe nharo dze SEO, basa guru nderokuwana makwikwi emazwi makuru.Zvirongwa zvakadai seGoogle AdWords uye SEMrush zvinogona kukubatsira kuti uwane mazwi makuru ane makwikwi asina simba. Aya mazwi anonyanya kukosha kushandiswa mukatiweb content. Pano, pfungwa iyi ndeyokuti kana iwe ukasanganisira mazwi makuru muhutano hwako hwehutano, Google crawler bots inotarisa zvaunoda uye iyoinowanikwa mumigumisiro yekutsvaga yeGoogle nguva inotevera kana munhu achitsinhanisa pachikwata chako..Izwi rinokosha rinofanira kuwanikwa kune zvikamu zvakasiyana zve apeji peji kuti uwane iyi CTR. Semuenzaniso, zvakakosha kuisa mazwi ekukosha pane peji peji, tsanangudzo yemeta uye pejizvigadzikane pachako. AdWords ine chiitiko chinokuratidza ma metrics uye kuongororwa kushandiswa kwekushanda kwemashoko enyu.
Zvinyorwa zvinofanira kuva zvakakosha kune niche iwe uri kutarisa. Iko kunofanirwa Iva kuiswa kwakakodzera kwemashoko mazita pajiji iroro. Zviripo zvinofanira kunge zvine urefu hwakanaka, zvichienderana nekona yedhesi kana kuona mafoni.Iva nechokwadi chokuti hauna zvinyorwa zviripo pane peji uri kuwedzera. Zvinyorwa zvinyorwa zvinotanga ma URL akawanda, kuderedza peji chiremera pamwe chete.
Kuti Google iite peji, inofanirwa kuve yakagadzikana, yakashamwaridzana neshamwari uye nerelevant content. Google algorithm zvikwereti mapeji nechinangwa chevashandi uye ruzivo. Iwe unofanirwa kuumba peji yebhundaneti iyo inoshandisa mudzidzi imwe nguva, zviri nyore kushandisa pamwe chete neyekutsvaga kutengesa nguva. Kunosanganisira dzimwe nhepfenyuro yehupenyu pamwe chete nemavhidhiyo inogona kunge yakawedzerwaadvantage.
Kune imwe neimwe inotanga paIndaneti, imwe nzvimbo yekutengeserana kwema digital inokosha.Makambani mazhinji anoshandisa nzira dze SEO uye kubudirira mukugadzira vatengi vakawanda kubva pane zviri nyore pane peji SEO uye website web design mabasa. KubudirirapaIndaneti, zvimwe zvakakosha pane peji SEO zvikonzero zvinoda kunyatsotevera. Semuenzaniso, vashandisi vanogona kuwana kutengesa kwakasimba kwemotokari kubva kune chinhu chikurukusarudzwa pamwe chete nekubatsirwa kubva kune yakakwirira kutendeuka kwekubudirira kweSeO campaign. Mushure mokushandisa mirayiridzo iri pamusoro, iwe paIndanetikushambadzira kunogona kuva nezvibereko zvikuru. Aya mazano haafaniri kungoshandiswa pakuwana vaenzi vazhinji asiwo anotamba chikamu mumutungamiri wechikwatawo zvakare sekushandura vaenzi kuva vatengi.